यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! कसरी बेश्ने त ….? पुरा पढी सेयर गर्नुहोस – Dainik Sangalo
September 29, 2020 1600
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे । अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन ।इन्टरनेटको दुनियामा खरिद विक्रीको प्रख्यात वेब साइट हरु हुन् eBay, OLX र quikr । यी वेबसाइटमा तपाई जे पनि बेच्न र किन्न सक्नु हुन्छ । ” यी पुराना नेपाली नोटको मूल्य अहिले १० लाख भन्दा बढी, यसरि बेच्नुहोस र छिनभरमै लाखौ कमाउनुहोस
केहि बर्ष देखि, विदेशमा पुराना नोट हरु बिक्रि गर्ने चलन थियो यो आजभोली नेपालमा पनि त्यतिकै मजाले चल्न थालेको छ । पुराना राणा शासनमा काटिएका नोटको मूल्य लाखौं पर्ने गर्दछ ।तपाई संग पनि नेपाली पुरानो नोट छ भने यसरि बिक्रि गर्न सक्नु हुन्छ । eBay को एउटा खाता खोल्नुहोस । आफु संग बएको पुरानो नोटको एउटा ठुलो साइजमा क्लियर फोटो खिच्नुहोस् ।
आफुले कति सम्ममा कसैले किन्न आए दिने ? मुल्य खुलाउनु आवस्यक छ । eBay को वेबसाइटमा नक्कली नोट अपलोड गर्न पाइदैन त्यसैले गलत धन्दा गर्छु भने जे पायो त्यहि नगर्नु होला ।यदि तपाइलाई नेपाली नोट बिक्रि हुदैनन भन्ने लाग्छ भने eBay को वेबसाइटमै गएर हेर्न सक्नु हुन्छ ।
त्यहाँ ५ डलर देखि १०० डलर सम्मका नेपाली नोट अपलोड गरिएका छन् ।यदि तपाई संग धेरै पुराना नोट हरु छन् भने इन्टरनेटमा बेच्न सुरु गरिदिनुस, तपाई संग भएको नोटको जुन मार्केट भ्यालु छ त्यो भन्दा १० गुना धेरै पैसा नोट बेचेर कमाउन सक्नु हुन्छ ।प्राय जसो चिनिया, इन्डियन, अमेरिकी लगाएत विश्वका विभिन्न देश बाट नोट खरिद गर्छन ।
Prevकाठमाडौमा आजवाट नयाँ नियम : सोर्सफोर्स चल्दैन !
Nextसेनामा रोजगारी, विभिन्न पदमा रोकिएको भर्ना प्रक्रिया सुरु (सूचनासहित)
तनहुँमा जिप दु’र्घटना,दुईको मृ’त्यु,६ घा’ईते
को’रोना खोपबारे अमेरिकाले दियो अत्यन्तै खुशीको खबर !! अबको १ महिनामा खोप आइसक्ने !